Time Core Messages M05 Grade 1 X | Wordworks
Sebenzisa idayisi leTIME uziqhelanise nokubala nomntwana wakho.
Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa
Kumntwana omncinci umzuzu ngamnye ngumzuzu wokufunda. Njengokuba usonga usenza idayisi lakho, qinisekisa ukuba uyamchazela umntwana wakho ukuba wenzani. Angakuncedisa ngokuthi afake iglu kwiindawo ezifuna ukuncanyathiselwa zidityaniswe futhi usenokufuna ukufaka umbala emachokozeni okanye awahombise.
Mcele umntwana wakho ukuba aphose idayisi aze aphathe amachokoza ajonge phezulu ecaleni kwidayisi uze ke ngoku umncedise abale ukuba mangaphi amachokoza. Umntwana wakho uzakuba esafunda ngamanani nokubala ngoko ke mkhokele kakuhle ungalindeli ukuba uza kuzichana zonke iimpendulo.
Zamani ukuphatha ichokoza ngalinye, niwabale kunye nomntwana wakho uze umcele ukuba enze intshukumo efana nokuqhwaba izandla, ukutsiba, ukunqwala intloko okanye ukubetha itafile ngenjongo zokubonisa inani lamachokoza eniwabale kunye. Umzekelo, amachokoza amathathu athetha ukuba kuza kuqhwatywa kathathu okanye kuza kutsitywa kathathu. Thatha imizuzu embalwa usenza lo msebenzi. Joyina umntwana wakho kulo msebenzi ze nonwabe.